Xiddig ka tirsan Paris Saint-Germain oo xaqiijiyey in Kooxdu ay isku dayayso inay la saxiixato Lionel Messi – Gool FM
(Paris) 25 Jan 2021. Laacibka khadka dhexe ee Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ayaa qiray in kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska ay isku dayayso inay la saxiixato Weeraryahanka Barcelona ee Lionel Messi.
Messi, kaasoo heshiiskiisa garoonka Camp Nou uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan ayaa si weyn loola xiriirinayaa inuu ka tagi doono kooxda reer Catalan.
Kooxda PSG ayaana ah mid ka mid ah kooxaha hor boodaya saxiixa Kabtanka Argentine ee Lionel Messi, waxaa sidoo kale kooxda doonaya saxiixa Leo ka mid ah naadiga Manchester City ee dalka Ingiriiska.
Imaatinka Macallin Mauricio Pochettino ee garoonka Parc des Princes ayaa ka dhigi karta mid dhab ah u dhaqaaqista Paris ee dhinaca Leo, xitaa xiisaha wiilka ay Messi dhalashada wadaagaan ee Paredes ayaa rajeynaya in kooxda ay ku qancin karto Kabtanka Barcelona inuu ku biiro dhankooda.
“Leo ayay u taalaa inuu yimaado kooxda, sababtoo ah PSG waxay isku dayeysaa inay qanciso,” Paredes ayaa u sheegay Wargeyska Corriere dello Sport.
“Inaad awood u yeelato inuu tababare kuu noqdo macallin ka socda dalkaaga iyo suurtogalnimada inaad kula ciyaarto Leo waa fursad weyn … waxaana rajeynayaa inay dhacdo.”
Marka laga soo tagao inuu la xiriiro asxaabtiisa ay isku Waddanka yihiin ee Paredes iyo Angel Di Maria, Messi wuxuu sidoo kale la midoobi lahaa saaxiibkiisii hore ee Barcelona, Neymar Jr haddii uu ku biirayo kooxda ka dhisan Magaalada Paris.